Mudane Xasan ?Soomaaliya caalamka ayey la shaqeynaysaa si loo meel-mariyo muhiimadaha gaarka ah? – Radio Daljir
Seteembar 12, 2013 3:41 b 0
Dubia, September 12, 2013 – Magaalada Dubia ee dalka Emarat-ka Carabta waxaa ka socda shirkii loogu magac daray Ka Hortagga Burcad Badeeda iyo iska kaashiga dhismaha awood ka hortagta, waxaa shirkaas goob-joog ka ah dhinacyo kala duwan oo Soomaali ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa khudbad uu ka jeediyey shalay furitaankii shirka, wuxuu kaga hadlay xiriirka caalamka iyo Soomaaliya si looga hortago khataro badan oo soo wajahaya dalka.
Mudane Xasan sheikh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay la shaqeyn doonto caalamka, si guu looga gaaro falalka Burcad-badeednimo, wuxuu intaas ku daray dowladda Soomaaliya in ay talaabooyin wax ku ool ah ka qaadatay dagaalka lagula jirri-badeedka.
Xasan sheikh ayaa intaas ku daray in Burcad-badeedu ay qeyb ka yihiin amni darrada ka jirta Soomaaliya isagoo arrintaas ka hadlay ayuu yiri ? Soomaaliya diyaar ayey u tahay in ay la shaqeyso caalamka, si loo dhaqan-geliyo muhiimadaha gaarka ah ee Amaanka, cadaallada, hagaajinta maamulka maaliyadda, dowaladd-wanaaga iyo kuwa kaleba?.
Shirka ka socday Dubia UAE ayaa ah mid sanadkan ka duwan sidii hore iyadoo inta badan laga soo saari doono qoddobo khuseeya ka hortaga Burcad-badeeda iyo in mar kale la helo dhismaha awood iska kaashatada dhibaatooyinka Burcad-badeeda dunida.
Kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ayaa la sheegayaa in ay hoos u dheceen weeraradii ay geysan jireen marka loo eego xeebaha dalka Soomaaliya, balse waxaa markasta soo noqon karta khatarta kooxda sida ay sheegeen war-bixinada laga soo saaro falalka Burcad-badeeda dunida.